China Polycarbonate Mirror factory na suppliers | Donghua
Polycarbonate Mirror sheets bụ toughest mirror nke dị na ahịa. N'ihi ike ha na-enweghị atụ na mmegide ha, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha enweghị ike ịgbagha. Offọdụ n'ime uru nke enyo PC anyị bụ nnukwu mmetụta dị ike, nkwụsi ike, nguzogide ọkụ dị elu, kristal-doro anya na nkwụsi ike akụkụ.
• Ọ dị na mpempe akwụkwọ 36 ″ x 72 ″ (915 * 1830 mm); omenala nha dị
• Ọ dị na .0098 ″ ruo .236 ″ (0.25 mm - 6.0 mm)
• Dị na ọla ọcha ọla ọcha
• Lee-N'obi akwukwọ dị
• AR ọkọ na-eguzogide mkpuchi dị
• Anti-foogu mkpuchi dị
• ọnọ polyfilm, nrapado azụ na omenala masking
Polycarbonate Mezighi ezi, PC Mirror, mirrored polycarbonate mpempe akwụkwọ
Dị ka a maara nke ọma, enyo polycarbonatebụ ihe kachasị emetụ n'ahụ. Igwe anya anyị nke polycarbonate (PC) bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihu enyo nke nwere nnukwu okpomọkụ na nguzogide na ike ike. Offọdụ n'ime uru anyịenyo polycarbonatena-enwe mmetụta dị elu dị elu, ogologo oge, nguzogide ọkụ dị elu, kristal-doro anya na nkwụsi ike akụkụ. Anyị nwere 0.25 ~ 6 mm ọkpụrụkpụ, 915 * 1830 mm size, doro anya na ọlaọcha na agba maka iji na ịkpụ ka size ọrụ.
Aha ngwaahịa Polycarbonate Mirror, PC Mirror, enyo Polycarbonate mpempe akwụkwọ
Agba Clear ọlaọcha
Nha 36 ″ x 72 ″ (915 * 1830 mm), omenala igbutu na-size
Ọkpụrụkpụ .0098 ″ ka .236 ″ (0.25 - 6.0 mm)
Njirimara Ike mmetụta dị elu, ogologo oge, kristal-doro anya
MOQ Mpempe akwụkwọ 50
Elu na Pee film
Laa azụ na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ nrapado n'akụkụ abụọ
Shipe nwere pallet osisi ma ọ bụ igbe osisi
Polycarbonate enyo anya dị mfe outclasses iko maka gburugburu chọrọ ihe mmetụta dị elu ma na-enwe ọkwa doro anya nke kristal.
Ngwa ndi ozo gunyere:
Security & Safety - Enyo nyocha, ọta ihu, ụlọ ọrụ mgbazi, ndị na-echekwa igwe, iko anya
Ewu Buildinglọ Azụmaahịa - Ngosiputa ahụike, enyo nyocha, na enyo ụlọ ịsa ahụ
Ebe ngosipụta na nrịbama - Ngosiputa Endcap, ihe ngosi ịchọ mma, mkpuchi ọla, ugogbe anya maka ngwa ahịa, na akara ngosi mkpọsa.
Ngosiputa Ngwa & Dentistry - Ime enyo na -eme ka mputa na enyo kọmpat
Industrylọ ọrụ akpakanamde - Mbelata ime, enyo na ngwa
Jiri enyo 1/8 ″ na obere nrụnye. 24 ″ x24 ″ ma ọ bụ obere maka ntụgharị uche dị ukwuu. Ahụkarị ngwa bụ maka ojiji na ụgbọ mmiri, camper, mkpọsa ngosi, wdg ebe onye nkiri dị nnọọ nso na mirror. Okpukpo a dịkwa mma maka Tebụl Isiokwu tọrọ n’elu tebụl (nke ukwuu maka ihe omume). Jiri enyo 1/4 ″ na ntinye ka ibu karịa 24 ″ x24 ″.
Nche Mirror na-echere: jiri 1/4 ″ - na 30-50ft ntụgharị uche ga-agbagọ agbagọ n'agbanyeghị agbanyeghị mgbago ahụ. Nwere ike ịnwale 1 pc maka ụdị nwụnye a.
Aterlọ ihe nkiri na Dancelọ Egwuregwu: jiri 1/4 ″ - buru n'uche na ntụgharị uche agaghị adị mma dị ka iko - mana a ga-eji enyo Plexiglass mee ihe na ngwa a maka nchekwa - ọ bụghị ogo ntụgharị uche. Ntughari uche ga-adi nma dika flat nke echichi.
Klọb na talọ oriri na ọ Resụ Resụ: jiri 1/4 ″ maka nchekwa na ike.
Ọ bụrụ na ị na-eji kposara maka arịọnụ, ị ga-agbagọ na echiche. I KWESEDR a a Plexiglass malite ịgba Bit maka ime oghere. Tụkwasị anyị obi - ị ga-agbaji ma ọ bụ mebie plastik na bit bit. Meji Ihu Abụọ - ụzọ dị mfe iji gbagoo. Mmiri-Dabere kọntaktị nrapado - ihe ngwọta na-adịgide adịgide na elu FLAT.
Jiri Brillianize ma ọ bụ ngwaahịa Novus maka nhicha na iwepụ ihe. Ma ọ bụ ncha na mmiri. Ejila Windex ma ọ bụ 409. Ihe bara uru bụ na enyo polycarbonate agaghị B NOT gbajie ma nwee ike ijikwa okpomọkụ dị elu (250F). Ọ dị mma maka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii, ụlọ ọgwụ mgbaba, ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ nrụnye ndị ọzọ nwere ike mebie. Polycarbonate enyo enweghị ike iwepụ ọkọpụcha ma ọlị. Maka ozi ndị ọzọ, biko kpọọ. Anyị anọwo na-ere enyo maka afọ 20 ma nyere ndị ahịa anyị aka ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị maka ngwa ha.
Anyị bụ ndị a ọkachamara Manufacturer
DHUA bu onye emeputara ihe kachasi nma na ihe acrylic (PMMA) na China. Nkà ihe ọmụma anyị dị mma malitere na 2000 ma wetara anyị ezigbo aha. Anyị na-enye ndị ọkachamara ọrụ na Onye-Kwụsị ọrụ maka ndị ahịa site na ịmechaa usoro mmepụta nke ịmepụta mpempe akwụkwọ, mpempe akwụkwọ, ịcha, ịkpụzi, thermo na-akpụ n'onwe anyị. Anyị na-agbanwe agbanwe. Anyị na-enye ngwaahịa na ọrụ ahaziri iji bulie afọ ojuju ndị ahịa. All anyị na ngwaahịa dị na omenala nha, ọkpụrụkpụ, na agba na shapes ect. Anyị ghọtara mkpa ọ dị inyefe ndị ahịa anyị oge ụfọdụ, ndị ọrụ anyị nwere ọkaibe, ndị ọrụ raara onwe ha nye, usoro dị mfe na arụmọrụ dị mfe na-enyere anyị aka ijide n'aka na anyị nwere ike mezuo nkwa anyị na-arụ ọrụ ngwa ngwa 3-15.
Enyo plastic mpempe akwụkwọ mgbanwe
enyo mpempe akwụkwọ
mirrored polycarbonate mpempe akwụkwọ
polycarbonate enyo enyo